थप प्राकृतिक कहिलेकाहीं र अधिक प्राकृतिक सन्दर्भहरूमा प्रश्न साथै, नयाँ प्रविधि पनि हामीलाई प्रश्न फारम परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ। जहाँ उत्तरदाताओं अनुसन्धानकर्ताहरूले द्वारा लिखित एक सेट विकल्प छनौट सबैभन्दा सर्वेक्षण प्रश्न, बन्द छन्। यो एक प्रमुख सर्वेक्षण शोधकर्ता कल एक प्रक्रिया हो उदाहरणका लागि, यहाँ एउटा बन्द सर्वेक्षण प्रश्न छ "मानिसहरूको मुखमा शब्दहरू राख्नुको।":
"यो अर्को प्रश्न कामको विषयमा छ। तपाईं यो कार्ड हेर्न र यो सूची मा जो कुरा तपाईं भन्दा एक काम मा रुचि थियो मलाई बताउन थियो? "
निकाल भइरहेको कुनै खतरा;
काम घण्टा, छोटो छन् निःशुल्क समय धेरै;
प्रगति को लागि संभावना;
काम महत्त्वपूर्ण छ, र उपलब्धि को एक भावना दिन्छ।
अब यहाँ खुला रूपमा आग्रह नै प्रश्न छ:
यी दुई प्रश्नको एकदम समान देखा तापनि, हावर्ड Schuman र स्टेनली Presser द्वारा एक सर्वेक्षण प्रयोग (1979) तिनीहरूले धेरै फरक परिणाम उत्पादन गर्न सक्ने प्रकट: खुला परिणाम लगभग 60% को बन्द प्रतिक्रियाहरू (चित्रा 3.7) मा विभाग को बाहिर गिर।
चित्रा 3.7: नतिजा Schuman and Presser (1979) । प्रतिक्रियाहरू प्रश्न बन्द वा खुला रूपमा आग्रह छ कि छैन भनेर आधारमा एकदम भिन्न छन्।
खुला र बन्द प्रश्नहरू एकदम फरक जानकारी उपज गर्न सक्छन् र दुवै सर्वेक्षण अनुसन्धान को प्रारम्भिक दिनमा लोकप्रिय भए तापनि प्रश्न क्षेत्र हावी गर्न आएका छन् बन्द। यो हैकम बन्द प्रश्न, राम्रो मापन प्रदान गर्न सिद्ध गरिएको छ किनभने बरु यसलाई तिनीहरूले प्रयोग गर्न धेरै सजिलो हो किनभने छैन; खुला-समाप्त प्रश्नहरू कोडिङ प्रक्रिया जटिल र महंगा छ। यसलाई ठीक भएको शोधकर्ता अगाडि थाहा छैन सबैभन्दा मूल्यवान् हुन सक्छ भनेर गर्नुभएको जानकारी छ किनभने टाढा कदम खुला प्रश्न देखि दुर्भाग्यपूर्ण छ।
म करेन लेवी संग गर्नुभएको केही अनुसन्धान, हामी खुला र बन्द प्रश्नहरू दुवै को सबै भन्दा राम्रो सुविधाहरू जोडती भनेर सर्वेक्षण प्रश्न को एक नयाँ तरिका सिर्जना गर्ने प्रयास (Salganik and Levy 2015) । छ, यो अनुसन्धानकर्ताहरूले खुला प्रश्न रूपमा नयाँ जानकारी सिक्न मदत गर्छ र यो एउटा बन्द प्रश्न रूपमा डाटा विश्लेषण गर्न सजिलो पैदावार। अनलाइन विकिपीडिया एउटा उदाहरण हो जो प्रयोगकर्ता उत्पन्न सामग्री, द्वारा संचालित प्रणाली प्रेरित भएर, हामी विकि सर्वेक्षण हाम्रो सिस्टम भनिन्छ। विकिपीडिया को विशेषताहरु र एक परम्परागत सर्वेक्षण combing गरेर हामी प्रश्न को एक नयाँ तरिका सिर्जना गर्न आशा।
विकि सर्वेक्षण मा डाटा संग्रह प्रक्रिया PlaNYC 2030, न्यूयोर्क गरेको citywide स्थिरता योजना मा बासिन्दाको 'विचार एकीकृत गर्न एक परियोजना हामी न्यूयोर्क शहर मेयर कार्यालय संग गरे द्वारा वर्णन गरिएको छ। प्रक्रिया सुरु गर्न, मेयर कार्यालय आफ्नो अघिल्लो आउटरिच आधारित 25 विचारहरू सूची उत्पन्न (जस्तै, "स्कूल पाठ्यक्रम" को भाग रूपमा हरियो विवादहरूको बच्चाहरु सिकाउनुहोस् ", केही ऊर्जा दक्षता अपग्रेड गर्न सबै ठूलो भवन आवश्यक")। यी 25 विचारहरू प्रयोग "बीउ," प्रश्न "कुन लाग्छ एक greener, ठूलो न्यूयोर्क शहर बनाउनको लागि एक राम्रो विचार छ?" को मेयर कार्यालय सोधे उत्तरदाताहरू विचार को एक जोडी प्रस्तुत गरेका थिए (जस्तै, "schoolyards खुला मार्फत सार्वजनिक खेल को मैदानों "र" उच्च अस्थमा दर संग छिमेक मा वृद्धि लक्षित रूख plantings ") को रूपमा शहर, र तिनीहरूलाई बीच चयन गर्न आग्रह (चित्रा 3.8)। छनौट पछि, उत्तरदाताओं तुरुन्तै विचार अर्को अनियमित चयन जोडी प्रस्तुत गरेका थिए। उत्तरदाताहरू उनि या त मतदान द्वारा कामना रूपमा लामो समय को लागि आफ्नो प्राथमिकता बारे जानकारी योगदान वा छानेर जारी गर्न सके "म निर्णय गर्न सक्दैन।" Crucially, कुनै पनि विन्दुमा, उत्तरदाताओं को द्वारा अनुमोदन जो-बाँकी आफ्नै विचारहरू, योगदान गर्न सके मेयर कार्यालय-भयो विचार को पूल को भाग अरूलाई प्रस्तुत गर्न। तसर्थ, सहभागीहरू प्राप्त प्रश्नहरूको खुला र साथ बन्द दुवै छ।
चित्रा 3.8: विकि सर्वेक्षण लागि इन्टरफेस (Salganik and Levy 2015) ।
मेयर कार्यालय यसको विकि सर्वेक्षण अक्टोबर 2010 मा निवासी प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न समुदाय सभाका एक श्रृंखला संग संयोजन मा शुरू। चार महिना भन्दा बढी, 1.436 उत्तरदाताओं 31.893 प्रतिक्रियाहरू र 464 नयाँ विचार योगदान। Critically, शीर्ष 10 रन विचार को 8 बरु मेयर कार्यालय देखि बीउ विचार को सेट को भाग भन्दा सहभागीहरू द्वारा अपलोड गरेका थिए। र, हामी हाम्रो कागज मा वर्णन रूपमा, यो धेरै विकि सर्वेक्षणमा ढाँचा छ। अर्को शब्दमा, नयाँ जानकारी खुला भएर, अनुसन्धानकर्ताहरूले सोधेर थप बन्द दृष्टिकोण प्रयोग गर्ने थियो गरिएका छुटेका कुराहरू सिक्न गर्न सक्षम छन्।